Zonke izindaba ze-Apple Watch Series 7 entsha evela kwa-Apple | Izindaba ze-IPhone
U-Angel Gonzalez | 15/09/2021 11:00 | I-Apple Watch
El umcimbi wayizolo Kwakuhloswe ngemikhiqizo emisha emisha ye-Big Apple. Ngokusho kwamahemuhemu, i-Apple Watch yayizoba ngenye yamadivayisi azothola izinguquko eziningi, kwakukhulunywa ngisho nangokwakhiwa kabusha okukhulu. Noma kunjalo i- Uchungechunge lwe-Apple 7 alunikanga lolo shintsho olukhulu ezingeni elibukwayo ngakho-ke abasebenzisi abaningi bakhungathekile ngamahemuhemu ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Iwashi elisha le-Apple inesikrini esikhudlwana, ukudayela okusha okwenziwe ngokwezifiso, nokulayisha ngokushesha kunezizukulwane ezedlule. Sikutshela zonke izindaba mayelana nale divayisi entsha engezansi.
1 Sonke isikrini: i-Apple Watch Series 7 enama-40% amafreyimu ambalwa
2 Idizayini idlulela ngale kwesikrini
3 Ukugcinwa kwezinketho zezempilo: i-ECG, i-O2 nokushaya kwenhliziyo
4 Isistimu entsha yokushaja esheshayo engama-33%
5 Umlingani ophelele we-Apple Watch Series 7: watchOS 8
6 Izesekeli zewashi elisha le-Apple
7 Ukutholakala kanye nokuqedwa kwe-Apple Watch Series 7
Sonke isikrini: i-Apple Watch Series 7 enama-40% amafreyimu ambalwa
Enye yezinjongo i-Apple emaka ngokwethulwa kwe-Apple Watch entsha ukukhulisa isikrini. Kulokhu, bananela ukuthi bakhuphukile Indawo yokubonisa engu-50% uma iqhathaniswa ne-Apple Watch Series 3. Bathunywe ukuthi basuse ozimele futhi bandise isikrini, behlisa amafreyimu ngama-40% futhi bazuze a Ukubukwa okungu-20% ngaphezulu ukwedlula ku-Series 6.
I-Apple namuhla imemezele i-Apple Watch Series 7, enombukiso we-Retina owakhiwe kabusha onendawo enkulu kakhulu yesikrini nemiphetho emincane, okwenza kube yisibonisi esikhulu kunazo zonke futhi esithuthuke kakhulu.
Isikrini se-Apple Watch Series 7 iyi- Ukuboniswa okuhlala ku-OLED Retina esakhiwe kabusha saba nemiphetho emincane. Eqinisweni, inzwa yokuthinta nephaneli le-OLED manje sezihlala kucezu olulodwa ngakho ukushuba kwesikrini kwehlile, kuthatha isikhala esincane nokunikeza ezinye izinketho zokwenza kahle ingaphakathi ledivayisi.
Lesi sibonisi seRetina siyaqhubeka nokuxhasa inketho ethi 'Njalo', evumela ukuthi isibonisi sihlale sikhombisa imininingwane ebalulekile. Eqinisweni, i-Apple Watch Series 7 nesikrini sayo manje sekukhanya ngokukhanyayo endlini ngama-70% uma unikwe lesi sici amandla.
Idizayini idlulela ngale kwesikrini
Okwe-Apple, ukwakheka kudlula kude isikrini. Umklamo owenziwe kabusha walindelwa ngokuphelele, washiya amajika ukuze enze ikesi elikwele ngaphezulu ngesitayela se-iPhone 12. Kodwa-ke, esinakho yi-Apple Watch Series 7 ngomklamo oqhubekayo lapho ihlala khona isikrini esigobile kanye ne-chassis eqinile. Lokho kumelana nakho kufinyelela ngaphambili lapho kuthinteke khona ukwandisa ubunzima besikrini.
Ukuthola isibonisi esikhulu se-Retina esikhulu ngaso sonke isikhathi kuye kwasho ukwenza izinto ezintsha ngokuqamba. Futhi lokho futhi kubavumele ukuthi bathathe amandla engilazi yangaphambili baye ezingeni elilandelayo.
Ingilazi yangaphambili engaphezulu kwesikrini ishintshiwe ikwenze uqine futhi umelane nokushaqeka. Ezingeni ledatha, le glasi ingu-50% ubukhulu kune-Apple Watch Series 6 ngakho-ke i-priori iphindwe kabili kunokuphikiswa. Baqhubeka nokuqinisekisa i- ukumelana nothuli, amanzi nokwethuka, njengasezizukulwaneni ezedlule. Ezingeni lamanzi kunjalo ukumelana kuze kufike kumamitha angu-50 ukujula.
Idizayini ephelele yeChungechunge 7 ivelele yona amakhona athambile, ayindilinga kanye no Umphetho wokukhipha kwesikrini. Lo mkhawulo wembula ukuphela kwesikrini nokuqala kwebhokisi uqobo. Lokhu kukuvumela ukuthi udlale ngemikhakha engangena esikrinini sonke ukuze wandise isikhala esikhona.
Ukudayela okusha okungokwezifiso okubili kufakiwe ukukhulisa usayizi wesikrini: Contour futhi Modular Duo.
Ukugcinwa kwezinketho zezempilo: i-ECG, i-O2 nokushaya kwenhliziyo
I-Apple Watch Series 7 ayifaki izinzwa ezintsha zezempilo. Eqinisweni, zonke izinzwa ze-Series 6. zigcinwa. Phakathi kwazo sithola ukuthi kungenzeka yenza ama-electrocardiograms ku-lead I, thatha isilinganiso senhliziyo bese ukala ukusuthiswa komoya-mpilo wegazi. Le datha ihlaziywa nge-watchOS 8 futhi ivumela ukuthumela izaziso kumsebenzisi kungaba ngezincomo noma ngezaziso.
Isibuyekezo se-watchOS 8 sethula ushintsho olusha ezingeni lezeMpilo njenge ukutholwa kwenani lokuphefumula ngomzuzu abazingeza njengepharamitha yokuhlaziywa kokulala. I-Series 7 ibuye isekele isici esenziwe kabusha se-Crash Detection sohlelo lokusebenza olusha oluzobona ukukhanya kosuku emasontweni azayo.
Isistimu entsha yokushaja esheshayo engama-33%
Uhlelo olusha lokushaja lwe-Apple Watch Series 7 luyilo Ama-33% asheshayo kune-Series 6. Eqinisweni, i-Apple ithembisa ukuthi ngokukhokhiswa kwemizuzu engu-8, idatha yokulala eyi-8 ingarekhodwa. Kuliqiniso elikhulu ngoba abasebenzisi abaningi bakhokhisa iwashi ebusuku ukuthi babe nebhethri ekuseni, ngaleyo ndlela bazincishe ukuqapha ukulala okunikeza imininingwane efanelekile kumsebenzisi.
Lolu hlelo olusha lubangelwa Intambo yokushaja ye-USB-C ehlanganise i-Apple Kwi-Series 6. Ngaphezu kwalokho, kuqokonyiswa ukuthi yi-Series 7 kuphela ehambisana nale nkokhiso esheshayo, noma ngabe ikhebula elisha, amanye amawashi azothatha isikhathi esijwayelekile ukushaja ngokugcwele ibhethri lawo.
Umlingani ophelele we-Apple Watch Series 7: watchOS 8
I-watchOS 8 uhlelo olulandelayo lokusebenza lwe-Apple lwe-Apple Watch yakho. Lapho i-Apple Watch Series 7 yokuqala iqala ukuthumela, bazobe sebenalo lolu hlelo olufakwe ngokuzenzakalela. Izinto ezintsha zikhona ngaphezu kwakho konke izinhlelo ezikuvumela ukuthi wandise ukusebenza kwedivayisi y imikhakha emisha evumela ukuthi wenze ngokwezifiso iwashi.
Phakathi kwabo, kukhona umkhakha omusha ohlanganisa izithombe kumodi ye-portrait ethathwe nge-iPhone, ukukhululeka okuthunyelwa izithombe kuMilayezo noma ukuhlanganiswa kokhiye ukuvula iminyango ehlakaniphile. Kungezwe futhi Izindlela zokuhlushwa okuyizilungiselelo ezichazwe ngaphambilini ukugwema iziphazamiso lapho senza imisebenzi ehlukile. Zonke lezi zici zizoqinisekisa ukuthi i-Apple Watch Series 7 ingaletha ukusebenza kwayo okuhle kuzici ezibalulekile.
Izesekeli zewashi elisha le-Apple
Kukhishwe imichilo emisha ye-Apple Watch Nike neHermès. Kuvuselelwe I-Nike Sport Loop ifaka imibala emithathu emisha futhi ifaka ilogo yeNike Swosh nombhalo we logo oshumekwe endwangwini yebhande. Le bhande lihambisana nokudayela okusha kwe-Nike Bounce okunezithombe ezenziwe ngokwezifiso ezihambisana nokunyakaza kwesihlakala, i-Digital Crown noma ukuthinta esikrinini.
Ku-Apple Watch Hermès zifakiwe Isifunda uH y la Gourmette Ukuvakasha Okubili ezinikeza ubukhazikhazi ku-smartwatch esisha se-apula elikhulu. Lesi sakamuva sihlonipha imigexo kaHermès kusuka ngawo-30 ngezixhumanisi ezifakwe esikhunjeni esithambile. Kufakwa imibala emisha kulezi zibopho ezimbili zezintambo ezikhona zeHermès Classic, Attelage kanye neJumping.
Ukutholakala kanye nokuqedwa kwe-Apple Watch Series 7
I-Apple Watch Series 7 itholakala ngosayizi ababili: 41mm futhi 45mm, njengasezizukulwaneni ezedlule. Isiphetho siyatholakala nge insimbi engagqwali, i-aluminium noma i-titanium. Imibala emisha emine inikezwa ngaphakathi kokuqedwa kwe-aluminium: Okuhlaza okotshani, okuluhlaza okwesibhakabhaka, (UMKHIQIZO) IBOMVU, i-Star White, ne-Midnight.
Ngizo iyatholakala lokhu kuwa futhi kuzoqala ku- $ 399. Ngaphezu kwalokho, i-Apple ithathe isinqumo sokumaketha ngaphezu kwe-Series 7, i-Series 6 (kusuka ku- $ 279), i-SE (Kusuka ku- € 299) ne-Series 3 (kusuka ku- € 219).
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Watch » Zonke izindaba ze-Apple Watch Series 7 entsha evela kwa-Apple
Lokho wukuthi, iwashi elingangezi lutho olusha uma kuqhathaniswa nochungechunge olungu-6.
I-Scl. Kubukeka sengathi awusifundanga lesi sihloko.
Azikho izinto ezithuthukisiwe ezishiwo kula mahemuhemu (okungukuthi amahemuhemu enzelwe wona). Ngino-6 futhi angizukuthenga i-7 …… .kodwa ukusho ukuthi yiwashi elifanayo… ishaja ama-30% ngokushesha… isikrini esisha esithuthukisiwe… nokunye okunye…. hhayi iwashi elifanayo.